Ungalinganisa Kanjani Ukutholwa vs. Imizamo Yokugcina | Martech Zone
Ungalinganisa Kanjani Ukutholwa vs. Imizamo Yokugcina
Lapho uzama ukuthola ikhasimende elisha, ngikholelwa ngokweqiniso ukuthi isithiyo esikhulu kunazo zonke okufanele usinqobe ukuthembana. Ikhasimende lifuna ukuzwa sengathi uzohlangabezana noma weqe okulindelwe kumkhiqizo noma kusevisi yakho. Ezikhathini ezinzima zomnotho, lokhu kungaba yinto ebaluleke kakhulu njengoba amathemba evikeleka kancane ezimalini abafisa ukuzisebenzisa. Ngenxa yalokhu, kungadingeka ukuthi ulungise imizamo yakho yokumaketha uncike kumakhasimende akho akhona.
Ukugcinwa akukwazi ukuba isu lakho lonke, ngokusebenzisa. Ukugcinwa kwenzelwa inkampani enenzuzo futhi kusho ukuthi uphumelele ekunikezeni inani kumakhasimende akho. Kodwa-ke, uma ungatholi amakhasimende amasha ngokungaguquguquki, kukhona ukwehla:
Amaklayenti akho angukhiye angakushiya usengozini uma ehamba.
Ithimba lakho lokuthengisa kungenzeka lingasebenzi kangako ekuzameni ukuvala futhi liphume ekwenzeni.
Ungahle ungakwazi ukukhulisa kakhulu ibhizinisi lakho.
Kule infographic evela kuFirst Data, banikeza ezinye zezibalo, amasu, namasu ahambisana nakho kokubili amasu okuthola nokugcina. Okuhle kunakho konke, zinikeza umhlahlandlela wokulinganisela imizamo yakho yokumaketha neyokuthengisa phakathi kwamasu amabili.
Ukutholwa vs. Izibalo Zokugcinwa
Kulinganiselwa ukuthi cishe 40% wemali engenayo kusuka ebhizinisini le-ecommerce kuvela phinda amakhasimende.
Amabhizinisi ane- 60 kuya ku-70% ithuba yokuthengisa ku ekhona ikhasimende kuqhathaniswa ne- 20% chance Okwe new ikhasimende.
Ngokusho kwabanye ochwepheshe, ibhizinisi elisungulwe kahle kufanele ligxile kulo Ama-60% ezinsizakusebenza zokumaketha ekugcinweni kwamakhasimende. Amabhizinisi amasha kufanele basebenzise isikhathi sabo esiningi ekuthengeni, kunjalo.
Ukulinganisela Ukutholwa vs. Ukugcinwa
Imizamo yakho yokumaketha inganquma ukuthi uwathola noma uwagcina kangakanani amakhasimende. Kunamasu amahlanu abalulekile wokuphaka bobabili:
Gxila kwikhwalithi - ukuheha amaklayenti amasha futhi ukhuthaze asevele ekhona ukuthi ahlale nomsebenzi okhethekile nemikhiqizo.
Zibandakanye Namakhasimende Amanje - yenza isisekelo samakhasimende akho esivele sikhona sizizwe sibalulekile ngokubacela ukuthi basakaze igama ngawe ngezibuyekezo eziku-inthanethi.
Yamukela Ukukhangisa Kwe-inthanethi - Sebenzisa imithombo yezokuxhumana ukuxhumana namakhasimende amasha nokumaketha okugxile kwe-imeyili ukuxhuma nokukhona.
Linganisa Isisekelo Samakhasimende Akho - ngena kudatha yakho ukuthola ukuthi imaphi kumakhasimende akho amanje okufanele ubambelele kuwo futhi okungekho.
Thola Okomuntu Siqu - Thumela amanothi abhalwe ngesandla kumakhasimende akhona ukumaketha okusebenzayo okusiza ukwakha izwi eliqinile lomlomo.
Mayelana nedatha yokuqala
Okokuqala Idatha ungumholi womhlaba wonke kwezinkokhelo nobuchwepheshe bezezimali, osebenzela izinkulungwane zezikhungo zezezimali nezigidi zabathengisi namabhizinisi emazweni angaphezu kwekhulu.